We Fight We Win. -- " More than Media ": နိုင်ငံအမည် Burma နှင့် Myanmar ဟူသော ဆောင်းပါးနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ဖြေကြားခြင်း။ ( အောင်ထူး )
နိုင်ငံအမည် Burma နှင့် Myanmar ဟူသော ဆောင်းပါးနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ဖြေကြားခြင်း။ ( အောင်ထူး )
နိုင်ငံအမည် Burma နှင့် Myanmar ဟူသော ဆောင်းပါးနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ ဖြေကြားခြင်း။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့ တွင် အထက်ပါ မိမိ ဆောင်းပါးကို ဖေ့စ်ဘုတ်အပေါ် တင်သွင်းပြီး နောက် မရှေး မနှောင်းမှာပင် အဆိုပါ အကြောင်းအရာကိုပင် မောင်အံ့ (မဟာဝိဇ္ဇာ-ဘုံဘေ) က ရေးသားထားသော ဆောင်းပါး တက် လာ ကြောင်းတွေ့ ရသည်။ စာဖတ်သူ၏မေးခွန်း မှာ ဤဆောင်းပါးနှစ်ခုအနက် ဘယ်ဟာမှန်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြား ပေးရန် ဖြစ်သည်။
ပထမ ဆုံးအနေနှင့် တင်ပြလိုသည်မှာ နိုင်ငံအမည်နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မည်သို့ ဖြစ်သင့်ကြောင်း ယခုမောင်အံ့၏ တင်ပြချက် သာမက၊ နောင်တွင် ထပ်မံပေါ်ထွက်လာ ဦးမည့် ရေးသားချက် အားလုံးကိုပါ ကြိုဆိုကြောင်းပင်။ ပညာရှင်များသာမက အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံပါဝင်သည့် သာမန်ပြည်သူများပါ၊ ၀ိုင်းဝန်းပါဝင်ဆွေးနွေးကြလျှင် အမြင်စုံစုံ သဘော ထားမျိုးစုံ လေ့လာခွင့်ရပြီးအားလုံး လက်ခံ နိုင်သည့် အဖြေတခု ရလာနိုင်ပါမည်။
မေးခွန်းရှင်သို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုသည်မှာ နိုင်ငံအမည်နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မိမိ၏ ဆောင်းပါးနှင့် မောင်အံ့၏ ဆောင်းပါးနှစ်ခုကို နိုင်းယှဉ်ကာ မှန်သည် မှားသည် ရွေးချယ်ခြင်း ထက် မည်သည့် ရှုဒေါင့်မှ တင်ပြချက်ကို လက်ခံနိုင်သနည်း ဟူ၍သာ မိမိကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။ ယင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် မေးခွန်းရှင် နှင့်တကွ အခြားစာရှုသူများ စဉ်းစား သုံးသပ်နိုင်ရန် နိုင်းယှဉ်ပြီး ထပ်မံ တင်ပြပါမည်။
မောင်အံ့ရေးသားသည့် အောက်ပါ စာပုဒ်မှ စတင်ကာ ရှင်းပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာများ၏ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ၊ မျိုးရိုး အစဉ်အလာကို မသိ သူများ(သိသော်လည်း မြန်မာ့အစဉ် အလာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို လက်မခံ လိုသော ပယ်ဖျက် လိုသော လူအချို့သည် မြန်မာ လူမျိုး၊ မြန်မာပြည်၊ မြန်မာ နိုင်ငံဟူသော မြန်မာ အသုံးအနှုန်းကို မသုံးနှုန်းဘဲ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်များ အမည်ပေး သုံးစွဲခဲ့သော (ဗားမား) (Burma) ဟူသော ဝေါဟာရကိုသာ သည်းခြေကြိုက် စွဲလမ်း နှစ်သက်စွာ ဆက်လက် သုံးစွဲနေကြ လေ တော့သည်။
ဤနေရာတွင် မောင်အံ့ နှင့် စာရေးသူ ရပ်တည်ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံခြင်း ကွာခြားမှုကို တင်ပြလိုပါသည်။ မည်သည့်ဘက်က မှန်သည် ဟူ၍ တင်ပြနေခြင်းမဟုတ်။ ရပ်တည်မှု မတူသည့် အခြေခံကို သာ ထောက်ပြလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ မောင်အံ့က မြန်မာလူမျိုး တမျိုး တည်း အခြေခံမှ အဓိက ရပ်တည်ရှုမြင်သည်။ မိမိက မြန်မာလူမျိုးရော၊ မြန်မာမဟုတ်သည့် အခြား တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအခြေခံ မှပါ ရပ်တည် ရှုမြင်သည်။
မောင်အံ့က ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်များပေးသမျှ ဘယ်အရာကိုမျှမယူစတမ်း သဘောမျိုးဖြင့် တင်ပြသည်။ မိမိနှင့်မတူ။ မိမိသည်လည်း နယ်ချဲ့ စနစ်ကို မကြိုက်။ လက်မခံနိုင်။ သို့ ရာတွင် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ဆီကရယူခဲ့သည် ဟူရုံမျှဖြင့် အားလုံး ကို ပစ်ပယ်ရမည် ဆို သည်ကိုလည်း လက်မခံ။ မိမိတိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး အတွက် ကောင်းတာဆိုလျှင် ယူမည်။ မကောင်းလျှင် ပယ်မည်။
သာဓက တခုပြပါမည်။ ယခုမြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော Common Law ဟုခေါ်တွင်သည့် ဥပဒေ စနစ်သည် ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ထံမှ အမွေရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ ယင်းစနစ်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများတွင် လက်ခံကျင့်သုံးဆဲဖြစ်သည်။ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ ဇာတ်စနစ်ပေါင်းစုံဖြင့် ရှုတ်ရှက်ခတ်လျှက်ရှိသော အိန္ဒိယ နိုင်ငံကြီးကို ဤ ဥပဒေ စနစ်ဖြင့် တည်ငြိမ်အောင် ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကို လေ့လာနိုင်သည်။ယခုသည် ဥပဒေစနစ် ကို ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ၏အမွေဟု လက်ညှိုးထိုးပြီး မိမိတို့ နိုင်ငံမှာ ဖျက်သိမ်းကြည့်ပါ။ ဘာနှင့် အစားထိုးပြီးတရားစီရင်ရေး ကို လည်ပတ်ရတော့ မည်မှန်း မသိ သဖြင့် တပြည်လုံး ၀ရုန်းသုန်းကား ဖြစ်ကုန်မည်။
နိုင်ငံအမည် ကို Burma ကို လက်ခံခြင်းမှာ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ က ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် နယ်ချဲ့ ကို ဆက်လက် ကိုးကွယ် သည့် အခြေခံမှ လက်ခံခြင်း လုံးဝမဟုတ်။ Burma သည် လူမျိုးကို မရည်ညွှန်းဘဲ လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်သည့် နယ်မြေ ကိုသာ ရည်ညွှန်းသဖြင့် ၄င်း၏ အနှစ်သာရကို နှစ်ခြိုက်သောကြောင့်လက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ အကျယ်ကို ဆက်ရှင်း ပါမည်။
နိုင်ငံအမည် သုံးစွဲခြင်းနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မောင်အံ့က ကုလသမဂ္ဂ က လက်ခံသုံးစွဲခြင်းကို အဓိကထားပြီး အောက်ပါ အတိုင်း ထောက်ပြ သွားသည်။
ဤတိုင်းပြည်နှင့် ဤနိုင်ငံသား အားလုံးတို့ကို (မြန်မာ-Myanmar)အခြေခံ ဥပဒေ၌ ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ကုလသမဂ္ဂသို့ အမည်စာရင်း ပေးသွင်းရာ၌ ယခင်က ရေးသားခဲ့သော (ဗားမား)(Burma)ဟူသော အမည် အစား (မြန်မာ)(Myanmar)ဟူ၍ အမည်သစ် တင်သွင်းခဲ့သည်ကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက အတည်ပြု သုံးစွဲလျက်ရှိပေသည်။
မိမိအနေဖြင့်မူ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ ကြီးက အတည်ပြုသုံးစွဲခြင်းမှာ မည်သို့ မျှဆန်းသည်ဟုမထင်။ တိုင်းပြည်တွင် အာဏာ ရနေသော အစိုးရက Myanmar ဟူ၍ မသုံးပါနဲ့ တော့။ Burma ဟုသာ သုံးပါ ဆိုပြီး တင်ပြလိုက်လျှင်လည်း Burma သို့ ပြောင်းသုံးမှာသာ ဖြစ်သည်။ မယုံလျှင်စမ်းသတ်ကြည့်ပါ။ မိမိတို့ နိုင်ငံ အမည်နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မောင်အံ့က ကုလ သမဂ္ဂရှုဒေါင့်မှ အဓိကထားတင်ပြ သည်။ မိမိ က တပြည်လုံးပြည်သူလူထု၏ သဘောထားဆန္ဒကို ရယူပြီး အတည်ပြု သုံးစွဲစေရေး အခြေခံမှ တင်ပြသည်။
ဤဆောင်းပါးနှစ်ခုတွင် အဓိကတူညီချက် တခုရှိသည်။ ဤသည်မှာ မြန်မာဟူသောစကားလုံးမှာ လူမျိုးကို ရည်ညွှန်း ခြင်း ဟူသောအချက်ပင်။ မိမိ၏ဆောင်းပါးတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြထားသည်ကို ပြန်လည်လေ့လာကြည့်ပါ။
(ကြေးညို ရောင် အဆင်းရှိ ၍ မြန်လည်းမြန်၊ မာလည်းမာသော လူမျိုးကို မြန်မာဟု ခေါ်ကြောင်း ဖွင့်ဆိုသည်ကို မှတ်သားမိဘူး ပါသည်။)
မိမိ၏ဆောင်းပါးနှင့် မောင်အံ့၏ဆောင်းပါး မတူသောအချက်မှာ မြန်မာဟူသည်မှာ စာရေးသူ ကဲ့ သို့ သော လူမျိုးတမျိုး ကိုသာ ရည်ညွှန်းကြောင်း မိမိနားလည်သည်။ ကရင်နီ၊ ကရင်၊ ကချင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ ပအို့ ဝ် အစရှိသော အခြား လူမျိုးများ မပါဝင်။ ယင်းလူမျိုးတို့ သည်မြန်မာမဟုတ်။ သီခြား လူမျိုးတမျိုးစီ ဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်၌ စတင်ဖွဲ့ စည်း ၍ လူမျိုးစု အပေါ်အခြေခံသည့် အမျိုးသားရေးရည်မှန်းချက်ဖြင့် စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ၀င်ဆဲဖြစ် သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု (မဒတ) က လူမျိုးတမျိုး၏ အသွင်လက္ခဏာ ငါးရပ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြောင်း မှတ်သားခဲ့ဘူးသည်။
(၁) မိမိလူမျိုး၏ သမိုင်းကြောင်း ရှိခြင်း၊
(၂) အဆိုပါ လူမျိုးက သုံးစွဲလျှက်ရှိသော ဘာသာစကား သီးခြားရှိခြင်း
(၃) အဆိုပါ လူမျိုးက သုံးစွဲလျှက်ရှိသော စာပေ တည်ရှိခြင်း၊
(၄) အဆိုပါ လူမျိုးက ကျင့်သုံးလျှက်ရှိသော ယဉ်ကျေးမှု ရှိခြင်း၊
(၅) အဆိုပါ လူမျိုးများ အဓိကနေထိုင်ရာ ပထ၀ီ နယ်မြေ တည်ရှိခြင်း၊
အဆိုပါ အသွင်လက္ခဏာ ငါးရပ်အရ ကရင်နီ၊ ကရင်၊ ကချင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ ပအို့ ဝ် အစရှိသည်တို့ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း၌ မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်သော အခြားလူမျိုးစုများ၏တည်ရှိမှုကို (မဒတ) က အသိအမှတ်ပြုသည်။
မောင်အံ့၏ ဆောင်းပါးတွင် ပါရှိသော အောက်ပါ သမိုင်းအချက်အလက်ကိုတော့ စာရေးသူအနေဖြင့် မှန်သည် မှားသည် မပြောနိုင်ပါ။ သမိုင်းပညာရှင်များ က ပါဝင် ဖေါ်ထုတ်ပေးလျှင် အကျိုးရှိနိုင်ပါမည်။
(ပျူလူမျိုး အုပ်စုသည် ပုဂံဒေသသို့ ရောက်ရှိပြီး ရွာကြီး ၁၉ ရွာကို စုပေါင်းပြီး တိုင်းပြည် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း ယင်း သောအခါ လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင် ထက်မြက်သူ တစ်ဦးကို အကြီးအကဲ ဘုရင်မင်း အဖြစ် တင်မြှောက်ကြသည်။ ယင်း အကြီးအကဲကို (သမ္မုတိရာဇာ) (ပြည်သူအများက တင်မြှောက်သော ဘုရင်) ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ရသည်။ ထိုဘုရင်ကို (သမ္မုတိရာဇ်)(သမုဒ္ဒရာဇ်) မင်း ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ အဆိုပါ သမုဒ္ဒရာဇ် မင်းကြီးသည် တိုင်းသစ် ပြည်သစ် နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်ရာ၌ မိမိနိုင်ငံ အတွင်း လူမျိုးစု အသီးသီး ကွဲပြားနေသည်ကို မလိုလား သဖြင့်နိုင်ငံတွင်းရှိ လူမျိုး အားလုံးကို (လျင်မြန်- သန်မာ-သော လူမျိုး) ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် (မြန်မာ) ဟူ၍ မှည့်ခေါ် လိုက်လေသည်။)
သို့ ရာတွင် မောင်အံ့၏ အထက်ပါ သမိုင်း တင်ပြချက် မှန်စေဦးတော့ မိမိ၏ နားလည်ပုံမှာ မောင်အံ့ နှင့် မတူပါ။ (သမ္မုတိရာဇ်) ဟူသော ဘုရင် တည်ထောင်သည့် နိုင်ငံ၏ အကျယ်အ၀န်းသည် ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဟု ခေါ်တွင် လျှက်ရှိသော နိုင်ငံ၏ အလယ်ပိုင်း ဒေသရှိ ပုဂံတ၀ိုက် ကွက်ကွက်ကလေးကိုသာ လွှမ်းခြုံသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံအတွင်း အဓိက ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေသူမှာ မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်သဖြင့် အခြားလူမျိုးစု အသီးသီးကို ပါ လွှမ်းခြုံစေပြီး မြန်မာဟုခေါ်တွင် စေရန် သတ်မှတ်လိုက်ပုံရသည်။ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံ ရှုဒေါင့်မှ ပြောရလျှင် လူမျိုးကြီး တမျိုးက အဓိက လွှမ်းမိုးကာ လူမျိုးကို အခြေခံ၍ တည်ထောင်သည့် နိုင်ငံ Nation State ကို တည်ထောင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားနိုင်ငံများ ကို သာဓက ပြရလျှင် ပြင်သစ်၊ အီဂျစ်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်း စသည့် နိုင်ငံများ ဖြစ်သည်။မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ သမိုင်းတွင်လည်း လူမျိုး ကို အခြေခံ၍ တည်ထောင်သည့် နိုင်ငံများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးသည်။ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ မွန် စသည့်လူမျိုးကြီးများ၏ ပဒေသရာဇ် နိုင်ငံများ ဖြစ်သည်။ သာဓက အားဖြင့် မွန်၊ မြန်မာ အနှစ်လေးဆယ်စစ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သမိုင်းကို ပြန်လေ့လာကြည့်ပါ။ မြန်မာမဟုတ်သည့် အခြားလူမျိုးကြီးများတွင်လည်း ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းနှင့် နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြသော လူမျိုးများ ရှိသည် မှာ အငြင်းပွားစရာ မရှိ။
သမိုင်းခေတ်တလျှောက်လုံးတွင် တိုင်းပြည်များ၌ ထုတ်ပြန်လိုက်သော အာဏာစက်သည် ထိုနိုင်ငံ၏နယ်နမိတ် ဘောင် အတွင်း တွင်သာ သက်ရောက်မြဲဖြစ်သည်။ မောင်အံ့၏ အဆိုအရ (သမ္မုတိရာဇ်) ဟူသော ဘုရင် တည်ထောင်ခဲ့သော နိုင်ငံသစ်သည် ရွာ ၁၉ ရွာ သာသာ ပုဂံဒေသတ၀ိုက်တွင် သာ တည်ရှိခဲ့ကြောင်း အငြင်းမပွားပါ။ သို့ ဖြစ်၍ အဆိုပါ အာဏာစက်သည် ပုဂံဒေသနိုင်ငံသစ်၏ အပြင်ဘက် ၄င်း၏အရှေ့ အနောက်တောင်မြောက်ရှိ ယခုလက်ရှိတိုင်တိုင်းရင်း သားများ နေထိုင်လျှက် ရှိသော တောင်တန်း၊ မြေပြန့် ဒေသများကို မလွှမ်းခြုံပါ။ ပုဂံဒေသ တ၀ိုက်ကွက်ကွက်ကလေး တွင်သာ အာဏာသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ သမိုင်း တွင်လည်း (သမ္မုတိရာဇ်) ဟူသောဘုရင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမိန့် ကို နာခံကာ ထိုစဉ်ခေတ်ပြိုင် တည်ရှိခဲ့သော ပုဂံဒေသအပြင်အပရှိအခြားတိုင်းရင်းသားဒေသများတွင်လည်း မိမိတို့ လူမျိုး၏ မူရင်း အမည်ကိုဖျောက်၍ မြန်မာလူမျိုးဟု ခံယူခဲ့ကြောင်းဖြင့် ရေးသားထားသည် ကို မိမိအနေဖြင့် မူ ဘယ်တုံးကမျှ မဖတ် ခဲ့ရဘူးပါ။
ပုဂံဒေသ၏ အရှေ့ အနောက် တောင် မြောက် ရှိ ယခုလက်ရှိတိုင် တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်လျှက်ရှိသောတောင်တန်း၊ မြေပြန့် ဒေသများကို ပါ လွှမ်းခြုံပြီး ပထမမြန်မာနိုင်ငံ တည်ထောင် နိုင်ခဲ့သူ မှာ (သမ္မုတိရာဇ်) မဟုတ်။ အနော်ရထာ မင်းစော ဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းတွင် အထင်အရှား ရှိပါသည်။ သို့ ရာတွင် သီးခြားလူမျိုးစု တစုခြင်းစီ၏ အင်္ဂါလက္ခဏာ များနှင့် ပြည့်စုံသော အခြားလူမျိုးစုများ၏ မူရင်းအမည်ကို ဖျောက်ကာ မြန်မာလူမျိုးဟူ၍ ခေါ်တွင်စေရန် အနော်ရထာ မင်းစော ကိုယ်တိုင်က အမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ဦးတော့ ယင်းမှာ မတရားသော အမိန့် အာဏာဖြစ်သဖြင့် မြန်မာမဟုတ်သော အခြား တိုင်းရင်းသားများက လက်ခံကြမည်မဟုတ်ပါ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းထောင်ကျော် ပဒေသရာဇ်စနစ် ကျင့်သုံးခဲ့ချိန်က သမ္မုတိရာဇ် ဘုရင်က အခြားတိုင်းရင်းသားများ အား ပုဂံဒေသ တ၀ိုက်ကွက်ကွက်ကလေးတွင် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်အောင် အတင်းအကြပ် ပြု ခဲ့သည့် လုပ်ဟန်မျိုးကို ယခု ခေတ်တွင် မကျင့်သုံးသင့်တော့ ပါ။ ယင်း လုပ်ဟန်မျိုးကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးသည့်နည်းနှင့်သာ မြန်မာနိုင်ငံဟူ၍ တည် ထောင်လိုလျှင်လည်း မြန်မာလူမျိုး များ အဓိက နေထိုင်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ပုဂံတ၀ိုက်၌ တည်ထောင်မှသာ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်နိုင်ပါမည်။ သို့ ရာတွင် ယခုအချိန်၌် မဖြစ်သင့်ပါ။
သမ္မုတိရာဇ်ဘုရင် ကြီးစိုးခဲ့သည့် ပုဂံဒေသတ၀ိုက်ကွက်ကွက်ကလေးကို ထားပါဦး။ အင်္ဂလိပ်က ကျယ်ပြန့် စွာ နယ်ချဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ သည့် ကာလ အတွင်းမှာပင် ကရင်နီနယ်များ မပါဝင်ခဲ့ကြောင်းဖြင့် သမိုင်းအထောက်အထားများက ပြညွှန်း လျှက်ရှိသည်။ ကရင်နီအမျိုးသားများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖွဲ့ အစည်းများ စုဆောင်းပြုစုထားသည့် သမိုင်းအချက်အလက် များအပြင် နယ်ခြားဒေ စုံစမ်းရေး ကော်မတီက ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် တင်သွင်းခဲ့သည့် အစီရင်ခံစာထဲမှ အောက်ပါ အပုဒ် တခုကို လေ့လာကြည့်ပါ။
In 1875, the independence of Western Karenni was guaranteed as follows, by an agreement between the British and the Burmese Governments:-
“It is hereby agreed between the British and Burmese Governments that the State of Western Karenni shall remain separate and independent, and that no sovereignty of governing authority of any description shall be claimed or exercised over that State.”
ထို့ အပြင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ကျင့်သုံးခဲ့သည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာပြီးနောက်မှသာ ကရင်နီနယ် များ၏ပါဝင်မှုကို ပြဌာန်းချက်တခု သီးခြား ထည့်သွင်းခဲ့ ရကြောင်း ယနေ့ တိုင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရက အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်အတွင်း 1935 Government of Burma Act အရ မြန်မာလူမျိုးများ အခြေစိုက်နေထိုင် ခြင်းမရှိသည့် အောက်ပါ တောင်တန်း၊ မြေပြန့် ဒေသများအား အထူးပြဌာန်းချက်များဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည် မှာ ပြည်မ၀န်ကြီးအဖွဲ့ က ၀င်စွက်ခွင့်မရှိ။ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံက တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
AREAS IN BURMA TO WHICH SPECIAL PROVISIONS APPLY.
(1) The Federated Shan States as specified in Notification No. 31 dated 27th September, 1922, of the Political Department of the Government of Burma as amended by any subsequent notification made before the commencement of this Act.
(2) The Shan States specified in Notification No. 41 dated 5th October, 1922, of the Political Department of the Government of Burma, as amended by any subsequent notification made before the commencement of this Act, other than the Federated Shan States.
(3) The Arakan Hill Tracts.
(4) The Chin Hills District.
(5) The Kachin Hill Tracts of the Myitkyina, Bhamo and Katha Districts.
(6) The Somra Tract.
(7) The area known as the Triangle.
(8) The area known as the Hukawng Valley laying to the north of the Upper Chindwin District.
(9) The Salween District.
(10) All tribal territories which at the date of coming into operation of this Act are unadministered.
မူလကထဲက စုစည်း စည်းလုံးညီညွတ်ပြီးဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများကို အင်္ဂလိပ်က လာရောက်ပိုင်းခြားခြင်း မဟုတ်၊ မူလကပင် သီးခြားစီတည်ရှိကြသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးနယ်မြေများကို သွေးမစည်းမိအောင် အင်္ဂလိပ်တို့က သပ်လျှိုကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု မှတ်ယူရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၁၉၉၀ မေလ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရ သည့် ဖယ်ခုံမြို့ နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ခွန်းမတ်ရ်ကိုဘန်က ထောက်ပြခဲ့သည်။ ၄င်းက လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည့်အချိန်အထိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ နယ်မြေ အနေအထားအမှန်ဟူ၍ မြေပုံဆွဲ ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ပင်လုံစိတ်ဓါတ် ရှင်သန်ဖေါ်ဆောင်ရေးမှ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်သစ်သို့ ။ ပြုစုသူ ခွန်းမတ်ရ်ကိုဘန်
ဗြိတိသျှလက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းရာတွင် ပထ၀ီအရ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနှင့် ဧရာဝတီဖြစ်ဝကျွန်း ပေါ်ဒေသများ၌ အဓိကနေထိုင်ကြသော မြန်မာလူမျိုးများ၏ သဘောဆန္ဒသာမက အခြားတောင်တန်း၊ မြေပြန့်ဒေသများ၌ နေထိုင်လျှက်ရှိကြ သော မြန်မာမဟုတ်သည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ သဘောဆန္ဒကိုပါ ရယူသည့် အနေဖြင့် ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံအမည်ကိုလည်း ဤသမိုင်းကြောင်းအခြေခံမှ ချည်းကပ်ရန်လိုပါမည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့ တွင် ချုပ်ဆိုသည့် ပင်လုံစာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာအစိုးရ ဟူ၍ သုံးနုန်း ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဟူရာ၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ နယ်မြေများ မပါဝင်သေးဟု မြန်မာမဟုတ်သော တိုင်း ရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက ခံယူခဲ့ကြသည်။ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုသဘောတူညီချက် ပေးပြီးနောက်မှသာ Burma သည် ယေဘုယျအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေအားလုံးကိုပါ လွှမ်းခြုံစေခဲ့သည်။ Burma ကို ကိုယ်စားပြု၍ အင်္ဂလိပ် လက် အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးအရယူနိုင်ခဲ့သည်။
ဤတွင် စောဒက တက်စရာရှိပါသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲရာ၌ နိုင်ငံအမည်ကို မြန်မာ ဘာ သာ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဟူ၍ ခေါ်တွင် ခဲ့သည့်အပြင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးသည့်နောက်တွင် ဤအမည်ကိုတရားဝင်ကျင့်သုံး ခဲ့သောကြောင့် နိုင်ငံအမည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရား ၀င် မဟုတ်ဘူးလား ဟူသော မေးခွန်းဖြစ်သည်။ မှန်ပါသည်။ မြန်မာ ဘာသာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲ ခဲ့စဉ်က လွတ်လပ်ရေးကို ရယူရန်သာ အဓိက ဦးတည်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရာတွင် ပြည်သူလူထု၏ သဘောဆန္ဒ အထူးသဖြင့် မြန်မာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသား အခြေခံလူထုများ၏ သဘော ဆန္ဒကို စနစ်တကျ ကျယ် ကျယ်ပြန့် ပြန့် ကောက်ယူ စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
တရားဝင် လွတ်လပ်ရေးအရယူခဲ့စဉ်က ချုပ်ဆိုခဲ့သော အောင်ဆန်း၊ အက်တလီ စာချုပ်နှင့် နု၊ အက်တလီ စာချုပ်များ ကို ပြန်ကြည့် ပါ။ စာချုပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ပင် နိုင်ငံအမည်ကို Burma ဟုသာ သုံးခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့ သည့် နု၊ အက်တလီ စာချုပ် အပုဒ် (၁) ၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြထားခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးကာလ တ၀ိုက်က နိုင်ငံအမည် မြန်မာနိုင်ငံရယူခဲ့ခြင်း နှင့် စပ်လျှဉ်း၍ မောင်အံ့ ၏ ဆောင်းပါးတွင် အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာရသည်။
လွတ်လပ်ရေးရသောအခါ နိုင်ငံအကြီးအကဲ ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များက ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ တရားဝင် ရုံးသုံးအမည် နာမကို (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်) ဟူ၍ နိုင်ငံတော် တံဆိပ်အတွင်း၌ စာတန်းထိုး၍ အတည်ပြု သုံးနှုန်းခဲ့ကြ သည်။ သို့ရာတွင် အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ရေးသား ရာ၌မူ (The Union of Burma) ဟူ၍ အင်္ဂလိပ်များ သုံးစွဲခဲ့သည့် ဝေါဟာရအတိုင်း (ဘားမား) ဟူ၍အတည်ပြု သုံးနှုန်းခဲ့သည်။ ယင်းBurma ဟူသော အသုံးအနှုန်းမှာ အခြေခံ ဥပဒေ နှင့် အညီ ပြဋ္ဌာန်း ထားသော(မြန်မာ)ဟူသော ဝေါဟာရကို တိုက်ရိုက်အသံပြောင်းလဲခြင်း(Direct Transcription) မဟုတ်သဖြင့် တိုက်ရိုက်အသံထွက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ (အက္ခရာ) ပြောင်းလဲခြင်းနည်းကိုအသုံးပြု၍ (မြန်မာ)(Myanmar) ဟူ၍ တပ်မတော် အစ်ိုးရ (န.ဝ.တ) က ပြောင်းလဲသုံးစွဲလိုက် သည်။
မောင်အံ့၏ အထက်ပါ ဖေါ်ပြချက်အရ တိုက်ရိုက် အသံထွက် ပြောင်းလဲခြင်း၊ (အက္ခရာ) ပြောင်းလဲခြင်း နည်းကို အသုံး ပြု၍ (မြန်မာ)(Myanmar)ဟူ၍ (န.ဝ.တ) က ပြောင်းလဲသုံးစွဲလိုက်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ်မှာ (န.ဝ.တ) စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင် သာ သိပါမည်။ စာရေးသူတော့ မသိပါ။ တိုက်ရိုက် အသံထွက် ပြောင်းလဲခြင်း ကို ပင် လက်ခံပါစေဦး၊ အဘယ်ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားလုံး Burma မှ မြန်မာစကားလုံး `ဗမာ`သို့ မပြောင်းဘဲ မြန်မာစကားလုံး `မြန်မာ`မှ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး Myanmar သို့ ပြောင်းလဲပါသနည်း။
တကယ်တန်းအားဖြင့်မူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ခိုင်ခန့် ရှည်ကြာစေရန် မြန်မာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကို အခြား မြန်မာမဟုတ် သည့် တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ကျင့်သုံးလို၍သာ ဤသို့ ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။
Burma သည် ၁၈၉၈ ဥပဒေမှစ၍ (လူမျိုးကို ကိုယ်စားမပြုဘဲ) နယ်မြေကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ရှင်းခဲ့ပြီ။ တို့ ဗမာ အစည်း အရုံးခေတ်တွင် ဗမာဟု သုံးရာ၌ မြန်မာလူမျိုးသာမက မြန်မာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားအားလုံးပါ ပါဝင်စေလို၍ သုံးစွဲ ခဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာခဲ့ရပြီ။ လွတ်လပ်ရေး ရယူခဲ့ချိန်၌ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးနယ်မြေများပါ ပါဝင်စေလျှက် Burma ဟူသော နိုင်ငံ အမည်ဖြင့် စာချုပ်လက်မှတ်များ ရေးထိုးကာ တရားဝင် ရယူခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက် အသံထွက် ပြောင်းလဲ မည် ဆိုလျှင် အင်္ဂလိပ်စကားလုံး Burma မှ မြန်မာစကားလုံး `ဗမာ`တနည်းအားဖြင့် ဗမာနိုင်ငံ သို့သာ ပြောင်းရ မည် ဖြစ်သည်။
အထက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော သမိုင်းအချက်အလက်များကို ထောက်ရှု၍ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ၏အမည် ပြောင်းလဲခြင်း၊ အသစ် မှည့်ခေါ်ခြင်း စသည်များကို လူများစုကြီးဖြစ်သော မြန်မာလူမျိုး တမျိုး တည်းက ဆုံးဖြတ်ခြင်းမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ လူများစုကြီးဖြစ်သော မြန်မာလူမျိုးများက ဆုံးဖြတ်ခြင်းပင် မဟုတ်၊ အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်တစုက လူထုကို လုံးဝချပြတိုင်ပင်ခြင်း မရှိဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် တိုင်းပြည်နံမည်ပြောင်းလဲခြင်းကို လုံးဝလက်မခံသင့်ပါ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာအရ Burma လဲ ခေါ်နိုင်တယ်၊ Myanmar လဲ ခေါ်နိုင်တယ် ဟူ၍ မရေမရာ ဖြေကြားခြင်းမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ပါ။ လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ခွင့်ရထားသော ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် သာမန်ပြည်သူတဦးပြောသကဲ့ သို့ ဒီမိုကရေစီဘဲ မိမိခေါ်ခြင်သလို ခေါ်မည်ဟု ပြောရုံဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ သမိုင်းကြောင်း ရှုဒေါင့်၊ ဥပဒေကြောင်း အခြေခံ၊ လူမျိုးကြီး ၀ါဒ နိုင်ငံရေး စနစ်အားဆန့် ကျင်မှု၊ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားများ၏ သဘော ဆန္ဒစသည့် ဘက်စုံ ဒေါင့်စုံ မှ စဉ်းစားသုံးသပ်ကာ အဘယ်ကြောင့် နိုင်ငံအမည်ကို လက်ခံခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း လူထုကိုရော နိုင်ငံတကာကိုပါ ရှင်းပြလျှင် အကျိုးရှိနိုင်ပါမည်။
တိုင်းပြည်လူထု နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရပြီး အတိဒုက္ခ ကြီးမားစွာရောက်နေချိန်၌ လိမ်လည် အတည်ပြုကာ ကျင့်သုံး လျှက် ရှိသော ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းပုံမှာ ပါရုံမျှဖြင့်လည်း တရားဝင်သည်ဟု လက်ခံ သုံးစွဲစရာလည်း မလိုပါ။ Myanmar ဟူ၍ ပြောင်းလဲကာ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ ထည့်သွင်းပြဌာန်းထား သည်ကို ပြင်ဘို့ ကြိုးစားသူများ ပြင်၍ ရလျှင်ရ၊ မရလျှင် ဖွဲ့ စည်းပုံ တခုလုံး ကို လူထုအားနှင့် တိုက်ဖျက်ကာ သမိုင်းအမှိုက်ခြင်း ထဲသို့ လွှင့်ပစ်လိုက်ရန်သာ ဖြစ်သည်။
မြန်မာလူမျိုးအပါအ၀င် မြန်မာမဟုတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ၏ ဆန္ဒကို ရယူ၊ တပြည်လုံးကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး နိုင်ငံအမည် အသစ် တခုကို တရားဝင် အတည်ပြုသုံးစွဲခြင်းမပြုနိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Burma သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ တရားဝင် နိုင်ငံ အမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် နိုင်ငံအမည်အား Burma ဟူ၍အခိုင်အမာ သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံအမည် Burma သို့ မဟုတ် Myanmar ပြသနာမှာ ယခုအချိန်၌ ခေတ္တငြိမ်သွားသော်လည်း မပြီးဆုံးသေးပါ။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို ကိုးကားကာ Myanmar ဟူ၍ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်စေရန် စစ်အစိုးရ၏ ဖိအားပေးမှုဆက်လက်ကျရောက်လာနိုင်ပါသေးသည်။ ယင်းဖိအားပေးမှု ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ယခုတကြိမ်တွင်မူ လုံးဝ အလျှော့မပေးဘဲ ကြံ့ကြံ့ခံ ငြင်းဆန်ကာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် နိုင်ငံအမည်အား Burma ဟူ၍အခိုင်အမာ ဆက်လက်ခေါ်ဝေါ်သွားလိမ့်မည်ဟု မြှော်လင့်ရသည်။
ဤသည်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့် ကျင်ရေးတိုက်ပွဲ၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်ရုံသာမက တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ လူထုကြီးတရပ်လုံး လိုလားမြှော်မှန်းသည့် စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်း ရေး အခြေခံအတွက်ပါ အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည် ဖြစ်၍ ယင်းကိုလိုလားသော ပြည်သူများကမူBurma ဟူ၍ ဆက် လက် ခေါ်ဝေါ်သွားကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။
ဇူလိုင်လ (၉) ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
let me share please.